၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၉ ရက်က ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့တွင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများနှင့် ကယန်းမျိုးဆက်သစ် လူငယ်အဖွဲ့အစည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေစဉ်။
ကယန်းမျိုးဆက်သစ် လူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ဖို့ အချက် ၄ ချက်ကို သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုပြုံးချိုက ပြောပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားဒေသတွေက ပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀ ဖွံံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်း သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကယန်းပြည်သစ်ပါတီက ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ ကယန်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားကို ကရင်ပြည်နယ်၊ သံတောင်ကြီး၊ လိပ်သိုမြို့နယ်ခွဲမှာရှိတဲ့ သောက်ရေခပ်ရွာမှာ ဒီနေ့မနက်က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီပွဲကို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်သားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် အမှုဆောင်တွေ၊ ပြည်နယ်အစိုးရဝန်ကြီးတွေ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားအကြောင်းနဲ့ ဒေသခံကယန်းလူမျိုးတွေရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကို ကို RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုနေရိန်ကျော် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
Kayah State has been discriminated so as black listed by the authorities for decades due to the lack of peace, in fact it was the best reason for the authorities. Asaresult, the people become the poorest and most illiterate among the States. Despite it's electricity distribution, local people had been living in the darkages.Whoever rules the country had denied the state's development. Where is the justice?